Xbox Series X: အချို့သောခလုတ်များသည်အချိန်မရွေးပိတ်နိုင်သည် - teles relay
Xbox Series X: အချို့သောခလုတ်များသည်အချိန်မရွေးပိတ်နိုင်သည်
By Tele RELAY တစ်ခု On နိုဝင်ဘာ 15, 2020
မျိုးဆက်သစ်အီလက်ထရောနစ်ထုတ်ကုန်များနှင့်အတူ၎င်း၏ပြproblemsနာများ၎င်း၏ဝေစု။ ဒီထုတ်ကုန်ရှုပ်ထွေးသောကြောင့်ဒါဟာမလွှဲမရှောင်ဖြစ်ပါတယ်။ ယနေ့တွင် Xbox Series X သည်အကြောင်းပြချက်များမဟုတ်ဘဲ၎င်းအကြောင်းကိုပြောနေခြင်းဖြစ်သည်။
ဗွီဒီယိုဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုလက်ခံခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်းနှင့်စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှသာလျှင်ဆာဗာများမကိုင်တွယ်နိုင်ခြင်းသို့မဟုတ်ဂိမ်းများစွာသည်မတည်ငြိမ်မှုများခံစားနေရခြင်းကိုသိရှိရန်မည်မျှစိတ်ရှုပ်စရာကောင်းသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ ဤသည်ကစားသမားရဲ့အတွေ့အကြုံကိုလုံးဝပျက်စီးစေသည်။ အသစ်ကအားလုံးကိုအတူကပြောသည်ခံရ Xbox စီးရီး X de Microsoft ကကဂိမ်းထဲမှာမဟုတျပါဘူးဒါပေမယ့် console ကိုသူ့ဟာသူ.
Xbox Series X သည်မမျှော်လင့်ဘဲပိတ်လိုက်သည်
ထုတ်ဝေပို့စ်များကိုတစ်စီးရီး၌တည်၏ ဖိုရမ်များပေါ်တွင် မိုက်ကရိုဆော့ဖ်၏အကူအညီ၊ မကြာသေးမီက Xbox Series X ပိုင်ရှင်များသည်သူတို့၏ console များသည်မည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုပိတ်ထားသည်ဟုသတင်းပို့ကြသည်။ အများဆုံးအဆိုးဆုံးအချိန်, သင်တန်း၏။ သူတို့ဂိမ်းတစ်ခုတင်ရန်ကြိုးစားသောအခါ၊ ၅-၁၀ စက္ကန့်ခန့်အကြာတွင် console သည်လုံးလုံးပိတ်သွားသည်။ အချို့ဂိမ်းကစားသူများကစက်ရုံပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်ဂိမ်းကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်ကြိုးစားသည်၊
ဒါ့အပြင်အလွန်လူကြိုက်များတဲ့ဆွေးနွေးမှုဟာအထူးသဖြင့်ဂိမ်းနှစ်ခုကိုလက်ညှိုးထိုးပြနေပုံရသည်။ ဤရွေ့ကား Assassin ရဲ့ Creed Valhalla နှင့်နောက်ဆုံးပေါ်ပါလိမ့်မယ် Duty ၏ခေါ်ဆိုမှု။ ယခင်မျိုးဆက် Xbox ခေါင်းစဉ်များတွင်ပြissuesနာမရှိပါ။ ထိုဂိမ်းများသာ Xbox Series X ကိုပြန်လည်စတင်ရန်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။
အချို့သူများကပြboxနာမှာ Xbox Series X ၏တည်နေရာနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်ဟုဆိုကြသည်။ အကယ်၍ console ကိုထည်ပေါ်တွင်တင်မည်ဆိုလျှင်ထည်သည်အပူလွန်ကဲပြီးစနစ်ကိုပိတ်ပစ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ် console သည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတွင်ပျက်စီးသွားနိုင်ပြီးယခု၎င်းပြtheseနာများဖြစ်ပေါ်စေသည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ မိုက်ခရိုဆော့သည်ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ တရားဝင်ဆက်သွယ်ခြင်းမရှိသေးပါ။ တစ်နည်းပြောရရင် Xbox Series X ကိုသင်မှာယူပြီဆိုလျှင်၊ အဲဒီကိစ္စအတွက်သင့်မှာရှိနှင့်ပြီဆိုရင်၊ မမျှော်လင့်ဘဲ system ပိတ်ခြင်း၏ပြproblemနာကိုသင်အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေလိမ့်မည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ ၎င်းသည်ယေဘူယျအားဖြင့်ပြင်ဆင်ရန်လွယ်ကူသည်မဟုတ်ပါ။
Sackboy: စွန့်စားခန်းကြီးတစ်ခု၊ ပလက်ဖောင်းဂိမ်းတွင်ထင်ရှားသော mascot ပြန်လာခြင်း
Twitch on PS5: အကောင့်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းနှင့်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအတွက်လမ်းညွှန်
ဤဆောင်းပါးသည် https://www.begeek.fr/xbox-series-x-certaines-consoles-seteigne-nispens-quand-350010 တွင်ပထမဆုံးပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။
Tele RELAY တစ်ခု 30176 ရေးသားချက်များ 1 မှတ်ချက်များ
spa နေ့! Kristen Stewart နဲ့ Sara Dinkin တို့ဟာ spa နေ့ကိုအတူတကွလုပ်ဆောင်နေကြတယ် - ဗီဒီယို
အိန္ဒိယ - ယာမမ်နှင့်ကက်ရှမီးယားရှိမနေထိုင်သောဘာသာရပ်များသည် UT နှင့်သက်ဆိုင်သော RTIs များကို file လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်။ Jitendra Singh | အိန္ဒိယသတင်း